Asekhushuliwe amaholo ezisebenzi zasekhaya | News24
Asekhushuliwe amaholo ezisebenzi zasekhaya
Umnyango wezabasebenzi umemezele ukukhukhulwa kweholo labasebenzi basemakhaya, kubika iSowetan.
Lezi zinguquko zizoqala ukusebenza ngokusemthethweni ngomhlaka 1 kuDisemba kuwo lo nyaka.
Ngokusho kwalo mnyango, leli holo elisha lizoze lishintshwe ngoNovemba 30, ku-2017.
Abasebenzi basezindlini eziholwa ngomasipala abakhulu kanye nalabo abasebenza amahora angaphezu kwangu-27 ngesonto sebezohola u-R12.42 ngehora kusukela ku-R11.44, imali yabo yangesonto izoba ngu-R559.09 kusukela kuR514.82, kanti ngenyanga sekuzoba u0R2422.54‚ kusukela ku-R2230.70.
OLUNYE UDABA:Usalithola iholo uthisha owaxoshwa eThekwini
Abasebenzi abasezindaweni ezaziwa ngokuthi u-Area B abasebenza amahora angaphezu kuka-27 ngesonto bona bakhushulelwe kanjena u-R11.31‚ ngesonto ngu-R508.93 kanti ngenyanga wu-R2205.17.
“Lezi zinguquko zihambisana nomthetho weZimo zokuSebenza nokungumthetho ogunyazwe yi-Sectoral Determination. Abasebenzi basezindlini bathathwa njenbabasebenzi abazwela kakhulu yingakho amaholo abo angaphansi kwe-Sectoral Determination," kusho lo mnyango ngesitatimende.
Abantu ababalwa ngaphansi kwabasebenzi basekhaya, ngabantu abahlanzisisa amakhaya, abenza ingadi, abaqapha izingane, kanye nabashayeli basekhaya.